Real Madrid Oo Shaacisay Xiddig Muhiim Ah Oo Uu Fayraska Korona Kaga Dhacay Ka Hor Finalka Spanisha Super Cup Ee Axadda - Laacib
HomeWararka CiyaarahaReal Madrid Oo Shaacisay Xiddig Muhiim Ah Oo Uu Fayraska Korona Kaga Dhacay Ka Hor Finalka Spanisha Super Cup Ee Axadda
Real Madrid Oo Shaacisay Xiddig Muhiim Ah Oo Uu Fayraska Korona Kaga Dhacay Ka Hor Finalka Spanisha Super Cup Ee Axadda
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa xaqiijisay jug weyn oo soo gaadhay ka hor ciyaaarta finalka Spanish Super Cup ee Axadda ee ay Athletic Bilbao foodda isku darayaan waddanka Sucuudiga.
Los Blancos oo Arbacadii 3-2 kaga soo badisay Barcelona oo ay ku wada ciyaareen magaalada Riyadh ayaa waxay filaysay in iyadoo ay xiddigaheedu isku dhan yihiin ay tegi doonto finalka. Karim Benzema, Vinicius Junior iyo Fede Valverde ayay ahaayeen xiddigihii guusha uga keenay Barcelona ee finalka u diray.
Carlo Ancelotti ayaa waxa ciyaartaas ka maqnaa David Alaba oo dhaawac soo gaadhay laakiin la xaqiijiyey inuu diyaar yahay ciyaarta Axadda, hase yeeshee waxa aan joogi doonin oo karantiil la gelaya difaaca midig ee Davani Carvajal oo kusoo bilowday ciyaartaas kaddib dhawac uu muddo ku maqnaa.
Baadhitaan lagu sameeyey ciyaartoyda Real Madrid ayaa waxa uu muujiyey in Carvajal uu qabo fayraska, waxaana laga dhex-saaray ciyaartoyda kooxda, waxaanu in muddo ah ku jiri doonaa hotel ku yaala magaalada Riyadh.
Waxa kale oo lasoo sheegayaa in Real Madrid ay ka jirto cabsi weyn oo la xidhiidha xaaladda caafimaad ee ciyaartoyda kale maadaama uu Dani tababarka la qaadanayay ciyaartoyda, lana wadaagayay shirarka iyo qolka cuntada.
Marco Asensio, Vinicius Junior, David Alaba, Marcelo, Rodrygo iyo ciyaartooyo kale oo dhaawacaan uu ku dhacay nooca cusub ee Fayraska Korona ayaa la sheegay in iyaga aan looga walwalsanayn inuu kusoo noqdo.
Dani Carvajal ayaa ka sokow ciyaarta finalka, waxa aanu awoodi doonin inuu qayb ka noqdo safarka ciyaartoyda Real Madrid ay dib ugu noqonayaan waddanka Spain maalinta Isniinta, waxaana uu kusii sugnaan doonaa Sucuudiga, illaa inta looga xaqiijinayo inuu taam yahay.